FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ANY MOUNTAIN MOUNTAIN - ALIKA
Harry the Greater Swiss Mountain Dog amin'ny 2 taona
Lisitry ny alika Swiss Mountain Mix Greater Switzerland
Alika Soisa Soisa Kanto
Alika Soisa Soisa lehibe
Alika omby soisa lehibe
Alika tendrombohitra soisa
volondavenona-fotsy Swiss-tn dawg
Ny alika Greater Switzerland Mountain dia lehibe, matanjaka ary hozatra. Ny karan-doha dia fisaka sy malalaka, misy fijanonana kely. Mitovy halava ny halaviran'ny vodi-damosina sy ny vava bontolo. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Mainty ny orona sy ny molotra. Ny maso salantsalany, miendrika amandy dia miovaova arakaraka ny hazelà ka hatramin'ny kastnut. Ny sofina salantsalany dia manana endrika telozoro, somary boribory eo amin'ny tendrony ary mihantona akaikin'ny loha. Haavo ny topline. Mahitsy ny tongotra eo anoloana. Boribory sy matevina ny sakafo. Lalina sy malalaka ny tratra. Ny rambony dia matevina kokoa eo am-potony, mihidy hatramin'ny teboka iray ary mahatratra ny hock. Esorina ny lalàma indraindray. Ny palitao roa dia manana palitao ivelany matevina tokony ho 1 - 1 1/4 hatramin'ny 2 santimetatra (3-5 cm) ny halavany. Matevina ny akanjo ambany. Ny palitao tricolor dia manana fototra mainty misy harafesina sy marika fotsy. Ny marika simetrika dia tian'ny mpiompy. Misy marika amin'ny harafesina eo amin'ny toerana iray amin'ny maso tsirairay, amin'ny takolaka sy amin'ny lafiny roa amin'ny tratra. Ny fotsy dia mipoitra toy ny lelafo eo amin'ny vava, amin'ny tratra ary amin'ny tendrony amin'ny rambony. Mety misy vozon'akanjo fotsy na patsa fotsy eo amin'ny hatoka.
Ny alika Greater Switzerland Mountain dia vonona ary maniry fatratra ny hampifaly. Izy io dia tsara amin'ny ankizy, be fandavan-tena, mamy ary mora mandeha, tsara amin'ny ankapobeny biby hafa ary tsy mahery setra alika. Ampianaro tsy hanenjika. Malina izy io ary miaro ny trano. Nanafana haingana ny Swissy handray ireo vaovao. Mpiambina mendri-piderana, be herim-po, mailaka ary ho mailo, raha mandre zavatra tsy ananan'ny besinimaro. Ny Greater Swiss Mountain Dog dia tsy ho faly voafetra amin'ny fiainana kennel, aleony ny fianakaviany. Ity karazana goavambe ity dia matotra miadana amin'ny saina sy ny vatana, manomboka amin'ny 2 - 3 taona hanaovana izany. Ny tanjona amin'ny fampiofanana ity alika ity dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Satria a mifampiresaka ny alika ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Io ihany no làlanao fifandraisana amin'ny alikanao mety ho fahombiazana tanteraka.
Hahavony: 23,5 - 28.5 (60 - 72 cm)
Milanja: 130 - 135 pounds (59 - 61 kg)
Mora volo , epilepsy, aretin'ny fandevonan-kanina, dysplasia and hip and distichiasis (volomaso fanampiny).
Hanao tsara izy ireo ao amin'ny trano iray raha toa ka zatra miasa tsara. Tian'izy ireo ny toetrandro mangatsiaka. Tokotany kely dia ampy.
Ilaina ny manao fanatanjahan-tena antonony, na izany aza mila atao isan'andro, lava izy ireo MANDEHANA , izay amboarina ny alika eo anilany na ao ambadiky ny olona mitazona ny firaka, tsy eo alohany velively, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary io mpitarika io dia mila ny olombelona.
10-11 taona eo ho eo.
Alika mpampakatra mora. Ny fanosotra tsy tapaka dia hahomby. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny alika Mountain Mountain Greater Swiss dia novolavolaina tany amin'ny Alpes of Switzerland, nidina avy tao amin'ny Roman Mastiff, izay naterina tany amin'ilay faritra 2000 taona lasa izay. Ny lehibe indrindra sy antitra indrindra amin'ny zana-kazo Sennenhund efatra, izay misy ny Alika Mountain Bernese , Alika omby Appenzell ary ny Alika omby entlebuch . Ireo alika efatra ireo dia samy manana loko sy marika avokoa saingy samy hafa habe. Nampiasaina ho alika alika, fiambenana sy fiompiana biby fiompy ary mpiambina mpiompy, ny lazan'izy ireo amin'ny maha alika alika azy dia nahatonga ny anaram-bosotra hoe 'soavalin'ilay mahantra.' Ilay alika an-tendrombohitra Greater Switzerland dia mety nanampy tamin'ny fampandrosoana ny St. Bernard. Saika lasa ilay karazany lany tamingana tamin'ny faran'ny taona 1900 satria ny masinina sy ny karazany hafa dia nanolo ireo alika tamin'ny asany. Dr. Albert Heim, izay manam-pahaizana amin'ny fomban'ny Sennenhund, dia nahita indray ny Greater Swiss Mountain Dog tamin'ny taona 1908 raha nitsara ny fampisehoana alika izy ary nanomboka namporisika ireo mpiompy mba liana amin'izy ireo. Ny ezaka nataony dia nahatonga ny fananganana indray ny karazany. Ny GSMD dia nampidirina voalohany tany Etazonia tamin'ny 1967, saingy mbola tsy fahita na dia any Suisse aza. Ny AKC no nahafantarana azy ireo voalohany tamin'ny 1995. Ny talenta an'ny GSMD dia ny fanarahana, ny fiambenana, ny fiambenana, ny fanaovana saribakoly ary ny fankatoavana amin'ny fifaninanana.
asehoy ahy ny sarin'ny alika bichon
Kasey dia alika Swiss Mountain lehibe kokoa aseho eto amin'ny faha-3 taonany. Tiany ny mandany fotoana miaraka amin'ny ankohonany ary mandeha mandeha lavitra .
Kasey ilay Alika Tendrombohitra Soisa Lehibe any amin'ny 3 taona
Dabo the Greater Swiss Mountain Dog amin'ny 8 herinandro
Dabo the Greater Swiss Mountain Dog amin'ny herintaona
Taylor the Greater Switzerland Mountain Dog toy ny alika kely amin'ny 8 herinandro
Taylor the Greater Swiss Mountain Dog toy ny alika kely amin'ny 9 herinandro mandry ao anaty bozaka mitsako hazo.
Taylor the Greater Switzerland Mountain Dog ho alika mandritra ny 17 herinandro
'Taylor the Greater Switzerland Mountain Dog amin'ny 4 taona sy tapany - izy no mandray zaridaina ivelan'ny tanandrano adiny roa dia milalao isan'andro . Rehefa tsy eo amin'ny valan-javaboary izy dia mandehandeha ao an-trano, mivovo amin'izay mandalo ny varavarankely, esp. squirrels. Tena sariaka amin'ny zavaboary rehetra izy, fa matetika kosa dia hiarahaba ny tompona ny alikany. Ny hany zavatra tiany mihoatra an'ity fitiavana ity dia ny sakafo. Izay manan-katao no sakaizany akaiky indrindra. '
Hijery ohatra misimisy momba ilay Greater Swiss Mountain Dog
Sarin'ny alika Mountain Mountain lehibe 1
Sarin'ny alika Mountain Mountain lehibe 2
dane mahafinaritra sy mix mastiff anglisy
sarin'alika alika mena
inona no karazana alika dia Bosco in marmaduke